XPS sheet extrusion - Mpamatsy tsipika fampidinana taratasy XPS China, Factory –Jwell
Izy io dia manana rafitra tantely feno tantely tonga lafatra ary ekena ankehitriny ho toy ny fitaovam-pandehanana mafana. Miorina amin'ny famerenana ny granules board polystyrene EPS ho fitaovana lehibe. Ny vokatra dia vokarin'ny extrusion, styling, sary ary ny fanapahana. Ny hakitroky, ny fitrohana ny rano, ny fitondran-tena mafana ary ny coefficient permeability etona dia ambany noho ny karazany hafa. Ny fitaovana fisorohana endrika lovia dia manana ny mampiavaka ny tanjaka tsara, ny lanja maivana, ny fahateren'ny rivotra, ny fanoherana ny harafesina, ny fahanterana, ny vidiny ambany sns, ary be mpampiasa amin'ny rafitra fanamafisana tafo; rindrin'ny fitehirizana mangatsiaka, tobin'ny barika, fitoeram-bary ary tranobe sivily insulated Thermal; fanamboarana ny làlambe, plazas; asa sivily ho an'ny arabe sy ny lalamby; rafitra fizarazarana ho an'ny tranobe, tranobe birao, ozinina sns.
Fitaovana XPS dia manana milina fanodinana andian-dahatsoratra tokana sy ilay milina fanodinana tsipika tokana mitovy. Ny fepetra arahana dia: Φ135 /Φ
150 andian-tsarimihetsika extrusion fantsom-panafody XNUMX ary Φ75 /Φ150 torolàlana mitovy fisaka milina fanodinam-bidy tokana fantsom-panafody ft. Ny milina fanodinana kambana miara-mihodina dia afaka manodina akora misy singa maro noho ny fahombiazan'ny fampifangaroana tena tsara.
Ny singa vaovolavola CO2 namboarina tao Jwell dia mampiasa CO2 fa tsy Freon sy butana hamokarana tabilao misy XPS, izay maitso sy sariaka amin'ny tontolo iainana ary ambany ny vidiny.
≥200m3 / andro
≥300m3 / andro